Semalt: Ahoana no Hakana Pop-ups, Add Exceptions, Ary Fanodinkodinana Any Mozilla Firefox
Ny lahatsoratra manaraka dia manazava ny safidy rehetra tokony ho fantatrao rehefa mifehy ny pop-ups ao amin'ny tranokalan'ny Mozilla Firefox ianao (Max.), Ny Bell Bell Semalt Manager Success Manager.
Inona no pop-ups?
Pop-ups dia varavarankelin'ny tranonkala izay miseho maimaim-poana amin'ny navigateur raha tsy mahazo alalana aminao. Tsy mameno velively ny efijery manontolo izy ireo ary afaka miseho eny an-tampon'ilay pejy amin'izao fotoana izao na eo ambaniny (pop-unders). Firefox dia manana endri-javatra miavaka izay mamela ny mpampiasa azy hifehy ny pop-ups sy ny pop-unders. Raha mitsidika ny pejy safidy ianao, dia ho hitanao fa alefan'ny default ny pop-up. Raha toa ka tsy nandroaka ny birao fampahalalana Firefox intsony ny mpampiasa, dia hiseho amin'ny fotoana rehetra ny pop-up. Ny sarimihetsika iray mampiseho pop-up voasakana dia hampiseho ihany koa ao amin'ny adiresy misy ankehitriny.
Raha te hiditra amin'ny safidy pop-up ianao ao amin'ny vohikala, tsindrio ny Options avy amin'ny bar of information na ny icon ao amin'ny bar. Afaka mifidy amin'ireto manaraka ireto ianao:
Mamela na mitahiry pop-ups amin'ny tranonkala amin'izao fotoana izao;
Manova ireo safidy Blocker pop-up;
Misafidiana ny tsy hampiseho anao ny hafatra mitory momba ny pop-up voasakana
Asehoy ny tsipiriany momba ny pop-up voasakana;
Mety manelingelina ireo tranonkala hafa ny fanakanana pop-ups ao amin'ilay tranokala. Misy tranonkala sasany mampiasa pop-ups ho an'ny sasany amin'ireo sehatra manan-danja. Raha manakana ny pop-ups ianao, dia esoriny ireo endri-javatra ireo. Raha hamela ny tranonkala sasany hanana ny pop-ups mihazakazaka mandritra ny dianao, dia mila ampidirinao ao amin'ny tranonkalan'ny lisitr'ireo lisitra ahafahana mampiseho pop-ups.
Tsy miasa foana ny fanakanana pop-ups..Ny vohikala sasany dia mahafantatra ny fomba fampiasana fomba tsy ampoizina, izay mahatonga azy ho sarotra amin'ny fisorohana ny pop-ups amin'ny fisehoan-dry zareo na dia efa voasakana aza izy ireo.
Ity misy zavatra andrasana ao amin'ny sehatra fanakanana pop-up:
1. Ny fidirana amin'ny tranokala fanakanana pop-up
Tsindrio eo amin'ny bokotra menu ao amin'ny zoron-tampony ankavanana ary mifidiana Fidirana avy amin'ny sakafo fanontana
Tafiditra ao amin'ny sehatry ny fiarovana sy ny fiarovana
Tsidiho ny varavarankelin'ny pop up eo ambanin'ny fizarana Fahazoan-dàlana;
Eo ambanin'ny tabilao Exception dia misy varavarankely vaovao vaovao ahafahana mampiditra lisitra tranonkala tianao haloa;
Miteny anao ny fifanakalozan-kevitra:
Avelao: manampy anao hampiditra tranokala ho lisitra miavaka;
Nesorina ny tranokala: ahafahanao manaisotra tranokala ao amin'ny lisitra miavaka;
Esory ny habaka rehetra: esory ny tranonkala rehetra ao amin'ny lisitra miavaka
2. Inona no mitranga raha tsy voasakana ny pop-up
Voalohany, jereo tsara raha avy amin'ny Firefox ny pop-up. Ny fijery dia tokony hampahafantatra anao raha tonga amin'ny pop-up browser ny pop-up. Raha ao amin'ny fikandran'ny pop up dia misy sary misy marika fanalahidy voafehy ao anaty faribolana, avy eo ny pop-up dia avy amin'i Firefox. Ny tsy fisiany dia midika fa mety ho lasibatry ny malware ianao ao amin'ny solosainao izay loharanon'ny pop-ups anao.
Faharoa, jereo raha ampidirina ao amin'ny lisitry ny Exclusions ny tranonkala. Araho ny fombafomba hidirana amin'ny fikandrana pop-up ary atsaharo ny boaty fifanakalozan-kevitra. Raha toa ka ny lisitry ny pop-ups dia ao amin'ny lisitra miavaka, tsindrio amin'ny Site Noforonina, ary tehirizo ary farano ny pejy.
Indraindray ny fikolokoloana pop-up dia fikolokoloana an-tserasera amin'ny Firefox mba hahazoana antoka fa tsy manakana pop-ups ho an'ireo tranonkala mitaky azy ireo hiasa. Noho izany, hamarino raha hita ny varavarankely rehefa avy mikitika ny totozy na manindry ny fanalahidy iray. Raha manao izany izy ireo, ary ny fampidirana fanakanana pop up dia tsy mila manahy.
Raha toa ka natao tahaka ny varavarankely ny windows pop-up saingy tsy tena izy, dia tsy afaka nanakana azy ireo Firefox.
Farany, raha toa ka misy pop-up miseho rehefa manokatra Mozilla mangataka anao handray anjara amin'ny fanadihadiana avy amin'ny SurveyGizmo, orinasam-pifandraisana iray izy ary Firefox dia tsy hanakana izany Source .